akwa nku anya na akwa na ọnụ ahịa ahịa | Rayson
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi Ngwaọrụ kachasị mma kachasị mma anyanwụ kacha mma na-achịkwa onye na-ahụ maka oge 00E 004 Factory Rayscomponce Raysson
Ule ule ahụ gosipụtara nke ahụ nwere ike ime ma dị mfe iji rụọ ọrụ ma na-elekọta.
Rayson Global Co., LTD bụ nwa US na-arụ ọrụ, guzobere na 2007 nke dị na Shishan Town, Foshan High-Tec
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi ihe kacha mma Introto kacha mma na-akwụ ụgwọ anyanwụ nke na-achịkwa echiche QE 004 Factory Rayson Rayson
bụ n'etiti ndị kachasị taa.
Ebe ọ bụ na ebe guzobere, Rayson chọrọ ịza ụzọ dị egwu ma dị mma maka ndị ahịa anyị. Anyị ehiwela nke anyị r&D Center maka imewe ngwaahịa na mmepe ngwaahịa. Anyị na-ekwe nkwa na ezigara ndị ahịa na nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere anyị, kpọọ anyị ozugbo. N'oge niile usoro ahụ, ndị ọkachamara QC anyị ga-ahụ usoro ọ bụla iji hụ na njiri mara mma.
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ ị na-anabata? Lc na anya / site na tt, site na 30% ego na 70% na-eme ka ọ bụrụ na ị ga - enweta ihe nlele ma ziga anyị ihe nlele ahụ. N'ime 15 ~ ụbọchị 20. Nwere ike ịjụ ụlọ ọrụ Express ka ọ bulie ihe nlele ahụ na ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ nye anyị ohere ịnakọta gị na akaụntụ gị.May aga m ezite ụlọ ọrụ gị ihe nlereanya. Ee, anyị na-eleta ụlọ ọrụ anyị n'oge ọ bụla, anyị dị nso na ọdụ ụgbọ elu mba ofesi, ọ na-ewere otu awa, anyị nwere ike ịhazi ụgbọ ala iji bulie gị.
Mgbe ọtụtụ afọ nke siri ike na ngwa ngwa, Rayson etoola n'otu n'ime ndị ọrụ kachasị aka na ndị ọrụ na China. Sperita Spring matragerings taa, Rayson buru elu dị ka onye na-eweta ọkachamara na nke nwere ahụmịhe na ụlọ ọrụ. Anyị nwere ike imewe, mepụta, mepụta, ma ree usoro dị iche iche na nke anyị na-ejikọ mbọ niile na amamihe anyị niile. Ọzọkwa, anyị na-ahụ maka inye ndị ahịa ọrụ dịgasị iche iche maka ndị ahịa gụnyere nkwado ọrụ na ọrụ ọsọ ọsọ. May nwere ike ịchọpụtakwuo banyere Spita Protering matraasi na ụlọ ọrụ anyị site na ịkpọlite ​​ngwaahịa anyị.